ဆိုးလျရှား ခတျေအလှနျ…ယူနိုကျတကျမှာ ဒီဂြောငျနဲ့ ဗနျဒီဘိချတို့နှဈဦးရဲ့ အဂေကျြ ကှငျးလယျအတှဲကို ပွနျမွငျရတော့မှာလား…? – MAN U FAN CLUB
ဒီနှဈဘောလုံး ရာသီကုနျရငျ စာခြုပျသကျတမျး ပွညျ့တော့မယျ့ ပွငျသဈ ကှငျးလယျလူ ပေါ့ဘာ ကို သကျတမျးတို့ခြုပျဆိုဖို့ မသခြော တော့တာကွောငျ့ သူ့နရောမှာ အစားထိုးနိုငျမယျ့ ကစားသမားတှကေို ယူနိုကျတကျအသငျးက ရှာဖှနေပေါတယျ။
ဒီနှဈ ဘောလုံးရာသီ အကုနျမှာ ဘာစီလိုနာအသငျး ကနေ ထှကျခှာမယျလို့ သတငျးကွီးနတေဲ့ နယျသာလနျ ကှငျးလယျလူ ဖရနျကီ ဒီဂြောငျးဟာလညျး ယူနိုကျတကျအသငျး စိတျဝငျစားနတေဲ့ ကှငျးလယျကစားသမားတှထေဲက တယောကျဖွဈတယျလို့ ဗွိတိနျ အခွစေိုကျ သတငျးဌာနတှကေ ဖျောပွသှားကွပါတယျ။
စပိနျထိပျသီးကလပျ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ ဒီဂြောငျး ကို ၂၀၁၉ ခုနှဈကမှ အဂေကျြဇျအသငျးကနေ ပေါငျ ၆၅ သနျးနဲ့ ချေါယူထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အသကျ ၂၄နှဈ သာရှိသေးတဲ့ နယျသာလနျ လကျရှေးစငျ ကှငျးလယျလူ ဖရနျကီ ဒီဂြောငျဟာ ၂၀၁၉ ခုနှဈကမှ အဂေကျြဇျအသငျးကနေ ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျ ၆၅ သနျးနဲ့ ပွောငျးရှခေဲ့သူ ဖွဈပွီး အသငျးနဲ့ ၂၀၂၆ခုနှဈ အထိ စာခြုပျသကျတမျး ကနျြရှိနပေါသေးတယျ။
လကျရှိအခိုကျအတနျ့မှာ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ သမိုငျးတလြှောကျ အဆိုးဝါးဆုံး ဘဏ်ဍာရေး အကွပျအတညျးနဲ့ ရငျဆိုငျနရေတာကွောငျ့ ပွောငျးရှကွေ့ေးကောငျးကောငျးရနိုငျမယျ့ ကစားသမားတှကေိုရောငျးထုတျပွီး အသငျးရဲ့ ဘဏ်ဍာရေးအခွအေနကေို ပွနျလညျတညျ့မတျအောငျလုပျဆောငျလိုနပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး စာခြုပျသကျတမျးကနျြရှိနပွေီး ပွောငျးရှကွေ့ေးမွငျ့နိုငျတဲ့ ဒီဂြောငျး ကို ရောငျးခဖြို့ ပွငျဆငျလာခဲ့တာဖွဈတယျလို့ သတငျးတှေ ထှကျပျေါနပေါတယျ။
နညျးပွသဈ ဇာဗီ ကလညျး အသငျးမှာ အကယျဒမီထှကျ ကစားသမားလေးတှဖွေဈတဲ့ ဂါဗီ နဲ့ ပကျထရီ တို့ရှိနပွေီ ဖွဈတာကွောငျ့ ဒီဂြောငျး ကို ရောငျးခပြွီး ငှရှောမယျ့ အသငျးတာဝနျရှိသူတှရေဲ့ အစီအစဉျကို သဘောတူဖှယျရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။
မနျခကျြစတာ ညနခေငျး သတငျးရဲ့ ဖျောပွခကျြအရ ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ဝကျဈဟမျးအသငျးရဲ့ ကှငျးလယျခံစဈ ကစားသမား ဒီကလနျရိုကျဈကို ချေါယူမယျဆိုရငျ ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျ ၁၀၀သနျးကြျော အသုံးပွုရနိုငျတာကွောငျ့ သူ့လောကျ ပွောငျးရှကွေ့ေးငှသေုံးဖို့မလိုတဲ့ ဒီဂြောငျးကို ပိုပွီးစိတျဝငျစားနခေဲ့သလို နှဈေေးကှကျ အဖှငျ့မှာ ချေါယူနိုငျဖို့ စီစဉျထားကွောငျလညျး သိရပါတယျ။
နညျးပွဆိုးလျရှားလကျထကျမှာ အရံခုံမှာအခြိနျကုနျခဲ့ရတဲ့ ဗနျဒီဘိချရဲ့အခွအေနကေိုသိပမေယျ့ အခုခြိနျမှာ နညျးပွ ဆိုးလျရှားကအသငျးကနေ ထှကျခှာသှားခဲ့သလို ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ နညျးပွသဈ ဖွဈလာဖို့ ရပေနျးစားနတေဲ့ ပိုခကျြတီနိုကလညျး ဗနျဒီဘိချနဲ့ ဒီဂြောငျတို့ကို အဂေကျြအသငျးမှာ ရှိနစေဉျကတညျးက သဘောကတြာကွောငျ့ ဒီဂြောငျ တယောကျ အသငျးဆီ ပွောငျးရှလေ့ာနိုငျတယျလို့လညျး သုံးသပျထားပါတယျ။
နောကျထပျ စိတျဝငျစားစရာတဈခုက ဒီဂြောငျး ကို မနျခကျြစတာမှာ ချေါယူဖို့ စိတျဝငျစားနတော ယူနိုကျတကျအသငျးတဈသငျးထဲသာမဟုတျပဲ ဂှါဒီယိုလာရဲ့ မနျစီးတီးအသငျးကလညျး ချေါယူဖို့ စိတျဝငျစားနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
ဆိုးလ်ရှား ခေတ်အလွန်…ယူနိုက်တက်မှာ ဒီဂျောင်နဲ့ ဗန်ဒီဘိခ်တို့နှစ်ဦးရဲ့ အေဂျက် ကွင်းလယ်အတွဲကို ပြန်မြင်ရတော့မှာလား…?
ဒီနှစ်ဘောလုံး ရာသီကုန်ရင် စာချုပ်သက်တမ်း ပြည့်တော့မယ့် ပြင်သစ် ကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဘာ ကို သက်တမ်းတို့ချုပ်ဆိုဖို့ မသေချာ တော့တာကြောင့် သူ့နေရာမှာ အစားထိုးနိုင်မယ့် ကစားသမားတွေကို ယူနိုက်တက်အသင်းက ရှာဖွေနေပါတယ်။
ဒီနှစ် ဘောလုံးရာသီ အကုန်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်း ကနေ ထွက်ခွာမယ်လို့ သတင်းကြီးနေတဲ့ နယ်သာလန် ကွင်းလယ်လူ ဖရန်ကီ ဒီဂျောင်းဟာလည်း ယူနိုက်တက်အသင်း စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေထဲက တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ ဗြိတိန် အခြေစိုက် သတင်းဌာနတွေက ဖော်ပြသွားကြပါတယ်။
စပိန်ထိပ်သီးကလပ် ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ဒီဂျောင်း ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကမှ အေဂျက်ဇ်အသင်းကနေ ပေါင် ၆၅ သန်းနဲ့ ခေါ်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၄နှစ် သာရှိသေးတဲ့ နယ်သာလန် လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ်လူ ဖရန်ကီ ဒီဂျောင်ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကမှ အေဂျက်ဇ်အသင်းကနေ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၆၅ သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး အသင်းနဲ့ ၂၀၂၆ခုနှစ် အထိ စာချုပ်သက်တမ်း ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။
လက်ရှိအခိုက်အတန့်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ သမိုင်းတလျှောက် အဆိုးဝါးဆုံး ဘဏ္ဍာရေး အကြပ်အတည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ကြေးကောင်းကောင်းရနိုင်မယ့် ကစားသမားတွေကိုရောင်းထုတ်ပြီး အသင်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို ပြန်လည်တည့်မတ်အောင်လုပ်ဆောင်လိုနေပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း စာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိနေပြီး ပြောင်းရွှေ့ကြေးမြင့်နိုင်တဲ့ ဒီဂျောင်း ကို ရောင်းချဖို့ ပြင်ဆင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
နည်းပြသစ် ဇာဗီ ကလည်း အသင်းမှာ အကယ်ဒမီထွက် ကစားသမားလေးတွေဖြစ်တဲ့ ဂါဗီ နဲ့ ပက်ထရီ တို့ရှိနေပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီဂျောင်း ကို ရောင်းချပြီး ငွေရှာမယ့် အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ အစီအစဉ်ကို သဘောတူဖွယ်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မန်ချက်စတာ ညနေခင်း သတင်းရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ခံစစ် ကစားသမား ဒီကလန်ရိုက်စ်ကို ခေါ်ယူမယ်ဆိုရင် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၁၀၀သန်းကျော် အသုံးပြုရနိုင်တာကြောင့် သူ့လောက် ပြောင်းရွှေ့ကြေးငွေသုံးဖို့မလိုတဲ့ ဒီဂျောင်းကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားနေခဲ့သလို နွေဈေးကွက် အဖွင့်မှာ ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားကြောင်လည်း သိရပါတယ်။
နည်းပြဆိုးလ်ရှားလက်ထက်မှာ အရံခုံမှာအချိန်ကုန်ခဲ့ရတဲ့ ဗန်ဒီဘိခ်ရဲ့အခြေအနေကိုသိပေမယ့် အခုချိန်မှာ နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားကအသင်းကနေ ထွက်ခွာသွားခဲ့သလို ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ နည်းပြသစ် ဖြစ်လာဖို့ ရေပန်းစားနေတဲ့ ပိုချက်တီနိုကလည်း ဗန်ဒီဘိခ်နဲ့ ဒီဂျောင်တို့ကို အေဂျက်အသင်းမှာ ရှိနေစဉ်ကတည်းက သဘောကျတာကြောင့် ဒီဂျောင် တယောက် အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့လာနိုင်တယ်လို့လည်း သုံးသပ်ထားပါတယ်။
နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုက ဒီဂျောင်း ကို မန်ချက်စတာမှာ ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတာ ယူနိုက်တက်အသင်းတစ်သင်းထဲသာမဟုတ်ပဲ ဂွါဒီယိုလာရဲ့ မန်စီးတီးအသင်းကလည်း ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။